शब्दकोश: नयाँ वर्ष: जोगाऔँ हर्ष
Him Jyoti Thapa April 09, 2008
la la badai chha jiban bhai..Blog ma nikkai pragati bhayechha.Ani naya barsa 2065 n naya Nepal banaune sapana pura hos bhanne subhakamana chha hai ta.
mero blog pani yeso herera comment garnu hai ta.www.himjyotithapa.blogspot.com
कैलाश April 16, 2008
बडो स्वाद लाग्यो मित्र तपाईको विविध लेखनमध्येको यो टुक्रा पढ्न पाउँदा । यस्तै यस्तै कुराकानीका पोका पन्तेराहरु खोल्दै जानुहोला आगामी दिनहरुमा । नत्र कसलाई के थाहा, मनका अन्तरकुन्तरमा लेउ लागेर टाँसिएर सुक्ने पो हुन् कि?
नयाँ साल र नयाँ नेपालको शुभकामना छ तपाईलाई । सबै त हैन मुख्य मुख्य कामकाज चाहि पूरा भएरै छाडोस् । जय होस सबैको ।